Waxba laguma gaari karo dhib la'aan. Hubaal, laakiin khataraha aan la maamulin ayaa dib kuu dhigaya, ama xitaa kaa celinaya inaad gaarto hadafyadaada mashruuca. Tababarkan, Bob McGannon, qoraa iyo maareeyaha mashruuca, wuxuu ku barayaa inaad sii odoroso, qiimeyso oo aad maareyso halista la xiriirta mashaariicdaada, yar iyo weyn. Soo ogow sida loo qiyaaso dulqaadka halista ee daneeyeyaashaada, sameyso qorshe halista ah oo aad diiwaangeliso ama xitaa aad hubiso sii wadida mashruuca.
Aasaaska maareynta mashruuca: Khataraha Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Cunto bixinta inta lagu guda jiro Covid-19: shaqaaluhu way ku cuni karaan goobaha shaqada
horeKU BILAABASHADA TILMAAMAHA ICHIMOKU KINKO-HYO